တော်လှန်ရေးအရွေ့ – Min Thayt
• ခေတ်အဆက်ဆက်က ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံရေးအင်အားစုနဲ့ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ဟာ ဝေးကွာသလို ဖြစ်နေခဲ့တာကြာညောင်းလှပါပြီ။ ခေတ်အခြေအနေအရ၊ အကြောင်းအကျိုးတွေ ကိုက်ညီပေါင်းဆုံလာတဲ့အခါမှာ၊ ဒီမိုကရေစီဒီလှိုင်းဟာ ကျောက်စိုင်၊ ကျောက်သားတွေကို ချိုးဖျက်ဖို့ မုန်တိုင်းရဲ့ တွန်းအားနဲ့ ပိုပြီး လှိုင်းကြီးလာပါတယ်။ အင်အားတွေဟာ လူထုက ပေးတဲ့ စွမ်းအားတွေကြောင့် ထုနဲ့ ထည်နဲ့ ပေါ်လာနေပါတယ်။ ယခင်က လက်နက်ကိုင်နိုင်ငံရေး အလုပ်မဖြစ်ပါဘူးလို့ ယူဆထားတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီးတွေကတောင်၊ စစ်ရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးပေါင်းစုမှုတွေကို အံ့မခန်းဖြစ်ရတယ်လို့ ပြောရလောက်တဲ့အထိ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။
• ယခု မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးဟာ၊ ယခင် တွေ့နေကျ ပုံစံဖြစ်တဲ့ အကြမ်းမဖက် အဟိံသ နိုင်ငံရေးနည်း သက်သက် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ခုခံစစ်၊ ကာကွယ်စစ်ကို ဆင်နွှဲတော့မယ့် အားကို ချီလာပါပြီ။ စွန့်ဦးတီထွင်နိုင်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ၊ လှေကြီးထိုးရိုးရိုးနဲ့ပဲ သမားရိုးကျ တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံရေးသမားအိုကြီးတွေကို ကျော်လွန်ဖောက်ထွက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ကိုလိုနီခေတ်က အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုလို ပုံစံမျိုး ထပ်တူတွေ့လာရပါတယ်။
• ယခင်က ဝိုင်အမ်ဘီအေ ဦးဆောင်တဲ့ ဝံသာနုအမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှုတွေတွေကို ဦးဆောင်တဲ့ သမားရိုးကျ အစဉ်အလာနိုင်ငံရေးသမား လူကြီးတွေကို ကျော်လွန်ပြီး စနစ်ကျတဲ့ တော်လှန်ရေးတစ်ရက်ကို လက်နက်ကိုင်နည်းနဲ့ လက်တွေ့ကျကျ ဖြတ်သန်းဦးဆောင်နိုင်မယ့် လူငယ်ပညာတတ်နိုင်ငံရေးသမားတွေ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ခြင်းကြောင့် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးဟာ မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်လာရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဝံသာနုအမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင်တဲ့ သက်ကြားအိုနိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီးတွေဟာ၊ ကိုလိုနီအစိုးရရဲ့ ပေးထားချက် ဘောင်ထဲမှာပဲ ပိတ်မိနေပါတယ်။ ဟုမ္မရူးလား၊ ဒိုင်အာခီလား…. ဆိုတာနဲ့ အငြင်းပွားနေခဲ့ပါတယ်။ ခွဲရေး၊ တွဲရေးနဲ့ အငြင်းပွားနေခဲ့ပါတယ်။ အဲသည်မှာ လူငယ်ပညာတတ်နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ….. ခွဲတာတွေ တွဲတာတွေ ဟုမ်းတွေ ဒိုင်တွေ မငြင်းတော့…. လုံးဝ လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့ တစ်ခွန်းတည်းသော ကြွေးကြော်သံနဲ့ ပြတ်သားလိုက်ကြပါတယ်။
• ယခုလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း။
• ပြတ်သားတဲ့ ဦးတည်ချက် ရှိလိုက်တာနဲ့ ခွန်အားတွေ အလိုလိုရလာတယ်….ဆိုတဲ့ မဟာမြိုင်တောရ ဆရာတော် ဦးဇောတိကရဲ့ မိန့်ဆိုချက်ကို သတိရလိုက်မိပါတယ်။ ပြတ်သားတဲ့ ဦးတည်ချက်ရှိလိုက်တာနဲ့ ခွန်အားတွေ အလိုလို ရလာတယ်။ သိပ်မှန်တာပဲ ။ သိပ်မှန်တာပဲ။
• မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ အရွေ့တစ်ခုကို တော်လှန်ရေးကာလ ရက်ပေါင်း (၁၀၀) ကျော်အချိန်အတွင်းမှာပဲ ခပ်မြန်မြန် တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်က နည်းပညာခေတ်ဖြစ်တာကြောင့် စပိ (speed) ကို ဦးစားပေးတဲ့ ခေတ်ဖြစ်လာတယ်လို့ ပြောရမလို ဖြစ်နေပါတယ်။ တန်ပြန်တော်လှန်ရေးတိုက်စစ်တွေဟာ သိပ်ကို မြန်ဆန်နေပါတယ်။ မြင်းခြံ၊ တလုပ်၊ ကနီ၊ မင်းတပ်၊ ဒီးမော့ဆို၊ မိုးဗြဲ။ ထို့နောက် ကချင်ဒေသ အနှံ့အပြား၊ ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း ဒေသ တချို့။
• လူမျိုးစုဒေသတွေမှာ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေ။ မြို့ကြီးတွေမှာ ရုတ်ချည်းထိုးနှက်မှုတွေ။ မြန်ဆန်လိုက်တာ။ သွက်လက်လိုက်တာ။ သတင်းပေး ဒလန်တွေက အစ အကင်းကို သေလို့။ ပြုသူ (subject) ကလည်း အမြှီးသိမ်း သေသပ်လှပလို့။ အပြုခံရသူ (object) မှာလည်း လက်သည်ကို ရှာမရ ဖြစ်လို့။ ဒီလိုနဲ့ တန်ပြန်လှှုပ်ရှားမှုတွေဟာ ဥပမာကောင်းတွေ ဖြစ်လာပြီ။ နမူနာကောင်းတွေ ဖြစ်လာပြီ။ ဆက်သွယ်ရေးခေတ်ဖြစ်တာမို့၊ အတုမြင် အတတ်သင်မှုတွေ သိပ်များတယ်။ လူသတင်း လူချင်းဆောင်။ ပန်းသတင်း လေညင်းဆောင်။
• မြန်မာတွေဟာ သင်လွယ် တတ်လွယ်ပါတယ်။
• သင်ချင်စိတ်က ပြင်းထန်နေလို့ ၊ အလွယ်တကူ သင်ယူတတ်မြောက်နေကြတာကိုလည်း တွေ့နေရပါတယ်။
• သင်ပြီးရင်လည်း လက်တွေ့ ကျင့်သုံးရမယ် မဟုတ်လား။
• ဗုဒ္ဓက ဟောတယ်။
• ပရိယတ္တိ နောက်မှာ ပဋိပတ္တိ လိုက်ပါမနိုင်ရင် အကျိုးမကြီးဘူး…တဲ့။
• စစ်ရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး ထိမှတ်မှသည် ပေါင်းဆုံမှတ် ဆီသို့။
၂၈ ၊ ၅ ၊ ၂၀၂၁။
Tagged Armed Struggle, Democratization, Mass Revolution, Revolution
Previous post တပ်စရိုက်လား…. စစ်ဗိုလ်စရိုက်လား….
Next post မြန်မာတွေ အမှတ်သည်းခြေရှိတယ်ဆိုတာ တကယ်ရော ဟုတ်ရဲ့လား